AH: February 2013
ကျွန်တော်နှင့် ဥစ္စာစောင့် တစ်ကယ်ရှိတာလား ၃
ဥစ္စာစောင့် တကယ်ရှိမရှိကတော့ ကျွန်တော်လည်း သေသေချာချာတော့ မပြောတတ်။ အရင်အပိုင်း ၁ ကတော့ ကျွန်တော့် အမေရဲ့ ဆေးခန်းမှာ ဖြစ်သွားတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကလေးကို ရေးထားတာ။ ခုအပိုင်းကတော့ ကျွန်တော့် အဖေရဲ့ ဇာတိမြို့ကလေး ကန်ကြီးဒေါင့်မြို့က အကြောင်းလေး။ ကန်ကြီးဒေါင့်ဆိုတာက ပုသိမ်ကနေဆိုရင် ၁၈ မိုင်လောက်ဆိုတော့ နာရီဝက် ၁ နာရီလောက် ကားမောင်းသွားရင်ရောက်တယ်။ အရင်တုန်းက ကားလမ်းတွေသိပ်ပြီးတော့ မပေါက်သေးတော့ ကန်ကြီးဒေါင့်နားက ဘဲကရက်၊ ဒေါင့်ကြီး၊ ကံကုန်း၊ ဖားစီကွင်း စတဲ့ စတဲ့ ရွာကလေးတွေက ကန်ကြီးဒေါင့်ကိုပဲ အားထားနေရတာ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကန်ကြီးဒေါင့်က မြစ်ကမ်းဘေးက ဆိပ်ကမ်းမြို့ကလေးလို ဖြစ်နေတော့ ရေလမ်းက အဓိကပဲ။ အနီးအနားကရွာတွေက စပါးပေါ်ချိန်ဆိုရင် စက်လှေတွေနဲ့ လာပြီးတော့ စပါးလာအပ်ကြ၊ ကြိတ်ကြ၊ ရလာတဲ့ ငွေစလေးတွေနဲ့ ငရုပ်၊ ကြက်သွန် စတဲ့ ကုန်စိမ်းတွေ ဖြစ်ဖြစ်၊ အ၀တ်အစားတွေဖြစ်ဖြစ် ကန်ကြီးဒေါင့်မှာပဲ လာပြီး ၀ယ်ကြတာ။ ခုကျတော့ ကားလမ်းတွေပေါက်လာပြီဆိုတော့ ကန်ကြီးဒေါင့်မြို့လဲ အရင်လောက် သိပ်ပြီး စည်စည်ကားကားမရှိတော့ပါဘူး။ အဲ.. စကားမစပ် မော်ဒယ် ချောရတနာ ကလည်း ကန်ကြီးဒေါင့် ဇာတိပဲ။
ကန်ကြီးဒေါင့်ရောက်ရင် လောကမှန်ကူ ဆုတောင်းပြည့်စေတီတော် ရှိမယ်။ ပုဂံခေတ်က ပုံစံကို ယူပြီးတော့ ဆောက်ထားတဲ့ စေတီတော်။ စေတီတော်ထဲမှာ ရွှေ၊ ကျောက်မျက်ရတာနာတွေနဲ့ ပူဇော်ထားတဲ့ ဆင်းတုတော် ရှိတယ်။ ပွဲတော်ရက်တွေဆိုရင်တော့ အပူဇော်ခံပါတယ်။ အနီးကပ် ကြည့်လို့လဲရတယ်။ ဒီ စေတီတော်ကို တည်တုန်းက ထူးထူးခြားခြားလေးတွေတော့ ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါကတော့ သိုက်မောင်နှမ ဇာတ်လမ်းပဲ။ စေတီတော်ကို ဦးစီးဦးဆောင်ပြီးတော့ တည်ထားခဲ့တာက အခု ပျံလွန်တော်မူသွားပြီးတဲ့ ကန်ကြီးဒေါင့်ဆရာတော်ကြီး။ စေတီတော်ကြီးနဲ့ ကပ်ရပ်မှာက မင်္ဂလာရာမ ကျောင်းတိုက်ရှိတယ်။ ပရိယတ္တိစာပေတွေကို သင်ကြားပို့ချပေးနေတဲ့ ကျောင်းတိုက်။ ကျောင်းတိုက်ကြီးကလည်း တော်တော့်ကို ထည်ဝါတဲ့ မှန်စီရွှေချ ကျောင်းတိုက်ကြီး။ သင်္ကြန်တို့၊ အခါကြီး ရက်ကြီးတွေဆိုရင် မိုးကုတ်ဝိပဿနာတရားစခန်းဖွင့်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ ရှင်ပြု နားသ မင်္ဂလာပွဲတွေလဲ ရွာနီးချုပ်စပ်ကလူတွေ လာပြီးတော့ စုပေါင်းရှင်ပြု ပွဲတွေ လုပ်ကြတယ်။ နောက်ပြီး နှစ်တိုင်း ဘုရားပွဲရှိတယ်။ ဘုရားပွဲတော်ဆိုရင် အရမ်းပျော်ဖို့ ကောင်းသပေါ့။ ဇာတ်ပွဲ၊ စားသောက်ဆိုင်တန်းတွေ၊ ဒေသထွက် ပစ္စည်းရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေ.. စသည် စသည်ဖြင့်။
Posted by Aung Htut at 2/24/2013 06:19:00 PM 11 comments
စက်ဝိုင်းတစ်ခုရဲ့ ပိုင် ဆိုတာက ၂၂ ကိုတည် ၇ နဲ့စား အဲ့ဒါပိုင်၊ ၃.၁၄၁၅၉ ဆိုပြီးတော့ ကျောင်းတုန်းကတော့ သင်ခဲ့ရတာပဲ။ ဒါပေမယ့် ဘာဖြစ်လို့ အဲဒီ တန်ဖိုးရလာလဲ၊ Pi (သို့) π (သို့) ပိုင် လို့ခေါ်တဲ့ အဓိပ္ပာယ်လေးကို သေသေချာချာကို မသိခဲ့တာ။ ဆရာတွေကို မေးဖို့ကြံတိုင်း တစ်ခြား အခန်းတွေရောက်ရောက်သွားတာနဲ့ ပိုင် အကြောင်းကို မမေးဖြစ်ခဲ့ဘူး။ နောက်ပိုင်း အင်တာနက်ပေါ်လာတော့မှ ပိုင်အကြောင်းကို နဲနဲပါးပါး သိလာရတော့တယ်။
ပိုင် ဆိုတာ စက်ဝိုင်းတစ်ခုရဲ့ အချင်း (diameter) နဲ့ သူ့ရဲ့ စက်ဝန်း (circumference) ရဲ့ အချိုးကို ပိုင်လို့ခေါ်တာ။ စက်ဝိုင်း ဘယ်လောက်ကြီးကြီး၊ ဘယ်လောက်သေးသေး ဒီအချိုးဟာ ပြောင်းလဲမသွားပါဘူး။ ဒါကိုတော့ ကျောင်းတုန်းက သိခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် စက်ဝိုင်းရဲ့ အချင်း (diameter) နဲ့ စက်ဝန်း (circumference) ကို ဘယ်လို အချိုးချသလဲဆိုတာက စဉ်းစားစရာ ပြဿနာတစ်ခု။ အဲဒါကို မြင်သာအောင် ဟောဒီ ပုံလေးကို ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Posted by Aung Htut at 2/21/2013 10:47:00 PM7comments
ဂဏမ်း မတူသော စတိုင်များ
YouTube မှာ လျှောက်မွှေရင်းနဲ့ PSY ရဲ့ Gangnam Style ကို မူကွဲလေးတွေနဲ့ Solo cover လုပ်ထားတာလေးတွေကို သဘောကျလို့ တင်လိုက်ပါတယ်....
ပထမဆုံး Cover က Steph Micayle ရဲ့ solo... နားထောင်လို့ကောင်း၏
Posted by Aung Htut at 2/20/2013 11:11:00 PM6comments
ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့က ရှန်ဟိုင်းကို နောက်တစ်ကျော့ ပြန်သွားဖြစ်တယ်။ ပန်ဒါကြည့်ချင်လို့… ပန်ဒါကို အပြင်မှာ တစ်ခါမှ မမြင်ဖူး။ ရှန်ဟိုင်းမှာ နေတာမဟုတ်ဘူးလား ဆိုတော့ အင်းဟုတ်တယ်… ဒါပေမယ့် သင်္ဘောကျင်းက ရှန်ဟိုင်းကနေ တစ်နာရီလောက်သွားရတဲ့ ချန်ရှင်းဆိုတဲ့ ကျွန်းလေးပေါ်မှာဆိုတော့ အဲဒီကျွန်းပေါ်က ဟိုတယ်မှာပဲ အနေများတယ်။ စနေနေ့ဆိုရင်တော့ ရှန်ဟိုင်းဘက်ကိုသွားပြီး ညစာစား ဖြစ်တယ်။ ကျွန်းပေါ်မှာက သင်္ဘောကျင်းကလွဲပြီးတော့ ကျန်တာဘာမှ ရှိသည်မဟုတ်။ ပျင်းစရာကောင်းသည်။ ပုံမှန်ဆိုရင် စနေနေ့ည ပြန်လာဖြစ်ပေမယ့် ဒီတစ်ခေါက်တော့ ရှန်ဟိုင်းမှာ တစ်ည အိပ်ဖြစ်လိုက်သည်။
ညစာကတော့ KAAB ဆိုတဲ့ XinTianDi(French quarter) က Grill ဆိုင်မှာ စားဖြစ်သည်။ ဒီဆိုင်က Beef Steak ကောင်းသည်။ ပြီးတော့ အဲ့ဒီနားက Rendezvous Bar မှာ Live Band နားထောင်လို့ကောင်းသည်။ ထို့ကြောင့် သွားနားထောင်ဖြစ်သည်။ နောက်တစ်နေ့တော့ Zoo ကိုသွားဖြစ်သည်။ Metro လိုင်း ၁၀ကို Nanjing West Station ကနေစီးသွားပြီး Shanghai Zoo Station မှာ ဆင်းလိုက်လျှင် ရှန်ဟိုင်း တရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်သို့ရောက်လေ၏။ ၀င်ကြေး ယွမ် ၄၀ ဖြစ်သည်။ ကျောပိုးအိတ်ကို customer service မှာအပ်သည်။ ၂ ယွမ် ပေးရသည်။ ပန်ဒါ… ပန်ဒါ ကြည့်ချင်သည်မှာ ပန်ဒါဖြစ်သည်။ ပန်ဒါက zoo ရဲ့ အလည်လောက်မှာရှိသည်။ တရိစ္ဆာန်ရုံရောက်တော့ တိရိစ္ဆာန်တွေမြင်ရသည်ပေါ့…. အင်း… အဲ့ဒါ ဓာတ်ပုံလေးတွေ တင်လိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
Posted by Aung Htut at 2/18/2013 09:47:00 PM 8 comments
ကျွန်တော်နှင့် ဘေဂျင်းအပိုင်းအစများ ၄
ဘေဂျင်းရောက်ရင်တော့ ပီကင်းဘဲကင်စားဖြစ်အောင် စားရမည်ဟုဆိုပြန်သည်။ ထို့ကြောင့် ပီကင်းဘဲကင်ဆိုင် ချီတက်ကြသည်။ ဆိုင်ရှေ့မှာ စားဖိုမှုး ဘဲရုပ်က လက်ယပ်ခေါ်နေသည်။ ဒီ ဘဲကင်ဆိုင်ကတော့ နာမည်အကြီးဆုံးပဲဟု တစ်ယောက်ကပြောသည်။ ဘာတွေ နာမည်ကြီးသည်တော့မသိ။ အထဲရောက်တော့ စင်မြင့်တစ်နေရာမှာ တစ်မျိုးပြီး တစ်မျိုး ပြနေကြသည်။ မျက်လှည့်လဲပါ၏၊ ရုပ်သေးလဲပါ၏၊ မျော့လိုမျိုး ခန္ဓာကိုယ် တွန့်လိမ်သော ပြကွက်လဲပါ၏။ လွတ်သွားသည်မှာ မျက်နှာဖုံး ပြောင်းသည့် show ပွဲဖြစ်သည်။ “သိုင်းမင်းသားနှင့် နတ်ကလျှာ” ဇာတ်ကားထဲက နာမည်မမှတ်မိတော့သော ဂိုဏ်းချုပ်ကြီးလိုပင် မျက်နှာဖုံးများကို ရွှပ်ကနဲ ရွှပ်ကနဲ ဖလပ်၊ ဖလပ် နေအောင် ပြောင်းနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။ ဘယ်လိုပြောင်းသည်တော့မသိ။ မြင်လဲ မမြင်ဖူး၊ ပွဲကလဲ လွတ်သွားသောကြောင့် သူများပြောသမျှ သြော်…. ဟုပင် ဆိုနိုင်သည်။ သို့သော် ဘယ်လိုပြောင်းလဲက သိချင်သည်။ သိချင်သောကြောင့် နံရံမှာချိတ်ထားသော မျက်နှာဖုံးကို ယူတပ်ကြည့်သည်။ သစ်သားမျက်နှာဖုံးကြီးဖြစ်သည်။ ဒါကို ဘယ်လိုများ ဖလပ် ဖလပ်နေအောင် ပြောင်းနိုင်ပါသနည်း? သူနည်း သူ့ဟန်တော့ ရှိမှာပေါ့။ သစ်သားလဲ သုံးချင်မှ သုံးလိမ့်မည်ထင်သည်။
Posted by Aung Htut at 2/16/2013 05:07:00 PM9comments
စိန့်ပီတာသည် ပုလဲတံခါးဝတွင် ရပ်နေသည်။ လူငယ်တစ်ယောက်လျှောက်လာသည်။
“သူငယ် သင်လူ့ပြည်မှာတုန်းက ဘာကုသိုလ်ကောင်းမှု့တွေ လုပ်ခဲ့လဲ?”
“အင်း…. ကျွန်တော်တစ်ခုတော့ သတိရတယ်… ကျွန်တော်ခရီးသွားတုန်းကပေါ့။ လမ်းမှာ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ို လူဆိုးတွေ ၀ိုင်ပြီးတော့ နှောက်ယှက်နေကြတာ။ ကျွန်တော်လည်း အဲ့ဒီလူဆိုးတွေဆီလျှောက်သွားတယ်။ ကောင်မလေးကို လွှတ်ဖို့ပြောတယ်။ အံမယ်.. ဒီကောင်တွေက ဂရုတောင် မစိုက်ဘူး။ ဒါနဲ့ အဲ့ဒီ လူဆိုးခေါင်းဆောင်ဆီကိုသွားပြီးတော့ အဲ့ဒီကောင်ရဲ့ မျက်နှာတည့်တည့်ကို လက်သီးနဲ့ထိုးပစ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ အဲ့ဒီကောင်ရဲ့ ဆိုင်ကယ်ကို ကန်ပြီးတော့ လှဲပစ်လိုက်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ အဲ့ဒီကောင်ကို နားရွက်ဆွဲပြီးတော့ ဟေ့ကောင်တွေ မင်းတို့ ကောင်မလေးကို လွှတ်လိုက်လို့ ပြောနေတာ မကြားဘူးလားလို့” ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်။
စိန့်ပီတာ ထိုသူငယ်ကို အတော်လေးစားသွားသည်
“အင်းပြီးတော့ရော ဘာဖြစ်သေးတုန်း ဆက်ပါဦး”
“အင်း ပြီးတော့ မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ကျွန်တော် ဒီကို ရောက်လာတာပဲလေ”
သင်္ဘောတစ်စီးပေါ်တွင်ဖြစ်သည်။ မျက်လှည့်သမားတစ်ယောက်သည် မျက်လှည့်ပြကွက် အမျိုးမျိုးကို ခင်းကျင်းပြသနေသည်။ ကြာလာလေသော် ကပ္ပတိန်မွေးထားသော ကြက်တူရွေးမှာ မျက်လှည့်ဆရာ၏ ပြကွက်များကို သိရှိလာ၏။
“ဟော.. ဦးထုပ်က တစ်ခြားဦးထုပ်နဲ့ လဲလိုက်တာ….”
“အဲဒီ စားပွဲအောက်မှာ ပန်းတွေကို ဖွက်ထားတာ….”
“ဟော ဟော… ဖဲချပ်တွေကို လက်ထဲကနေ လွှတ်ချလိုက်ပြီ…”
စသည်ဖြင့် မျက်လှည့်ဆရာ၏ လှည့်ကွက်တွေအားလုံးကို ပွဲတိုင်းမှာ ဘေးနားကနေ အော်နေသည်။ ဤသို့နှင့် ပွဲပျက်သည့်နေ့မှာလည်း မနည်းမနော။
ဒီလိုနှင့် တနေ့တော့ သင်္ဘောမှောက်သည်။ မျက်လှည်ဆရာလဲ ပျဉ်ချပ်ကလေးကို ဖက်ပြီး ပင်လယ်ထဲမျောနေသည်။ ကြက်တူရွေးကတော့ သူ့ဘေးမှာ ပါလာသည်။ ဒီလိုနှင့် ပင်လယ်ထဲမှာ တစ်ရက်ပြီး တစ်ရက်…..။ နောက်ဆုံးတော့ ကြက်တူရွေးက မျက်လှည့်ဆရာကိုပြောသည်….
“ကဲ.. ကျုပ်အရှုံးပေးပါပြီဗျာ…. သင်္ဘောကို ဘယ်လိုဖွက်လိုက်သလဲဆိုတာ ကျွန်တော့်ကို ပြောပြ”
Posted by Aung Htut at 2/15/2013 12:21:00 PM4comments
ကျွန်တော်နှင့် ဘေဂျင်းအပိုင်းအစများ ၃
တရုတ်ပြည်ရောက်လျှင် မဟာတံတိုင်း မတက်မိခြင်းမှာ ကြီးစွာသော ဆုံးရှုံးမှု့ဖြစ်သည်ဟု တရုတ် တစ်ယောက်ကပြောသည်။ မင်းရော တက်ပြီးပြီလား မေးတော့ ဟင့်အင်း တဲ့။ ဒါပေမယ့် တစ်နေ့နေ့ပေါ့လို့ ပြန်ပြောသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မဟာ တံတိုင်းကို တက်ဖြစ်သည်။ ဘေဂျင်းကနေ ဆိုလျှင် မဟာတံတိုင်းကို နေရာနှစ်ခုမှ တက်နိုင်သည်။ တစ်ခုကတော့ တော်တော်လေး ပြန်ပြင်ထားသည့် မဟာတံတိုင်း ဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ခုကတော့ ရှေးဟောင်းအတိုင်းကို ထိန်းသိမ်းထားသတဲ့။ ကလင်တန် တို့ဘာတို့က မဟာတံတိုင်း အဟောင်းကို တက်သတဲ့။ ဘယ်တံတိုင်းကို တက်ချင်လဲမေးတော့ လူနည်းတဲ့ နေရာသွားမယ်ဆိုပြီး တံတိုင်း အဟောင်းဘက်ကို ဦးလှည့်ဖြစ်သည်။
ဘေဂျင်းမြို့ထဲကနေ ၁ နာရီခွဲ ၂နာရီလောက် မောင်းသွားရသည်။ ဟိုရောက်တော့ ဘာရယ်မသိ ကျိုက်ထီးရိုးကို သွားသတိရမိသည်။ အမှတ်တရပစ္စည်းရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေက တောင်တက်လမ်းတစ်လျှောက် အများကြီးမှ အများကြီး။ မဟာတံတိုင်းပေါ်မှာတော့ ရေခဲနေပြီ။ Cable Car တွေရှိသည်။ ကော်ဖီက လက်တစ်ဖက်၊ ကင်မရာက တစ်ဖက်၊ Cable car က ယိမ်း နောက်ဆုံးတော့ ကော်ဖီခွက် မှောက်ခြင်းနှင့် အဆုံးသတ်သည်။
Posted by Aung Htut at 2/13/2013 10:23:00 PM6comments
တခါတလေကျတော့ ဖန်ခွက်နဲ့ စကားပြောရတာ တော်တော်လေး အဆင်ပြေတယ်။ တခါတလေတော့ ဖန်ခွက်နဲ့ စကားပြောရတာ ပျင်းစရာကောင်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ အလုပ်ဖြစ်တယ်။ ကိုယ်ပြောချင်တာပြော… သူကနားထောင်တယ်။ ဒီအတွက် တစ်ခါမှ ပျင်းရိတယ်မှရှိဘူး။ အမြဲတမ်း လတ်ဆတ်နေတယ်၊ မကြိုက်ရင် ဖန်ခွက်အသစ်တစ်ခွက် လဲလိုက်ဖို့ပဲ။ ပြောချင်တဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ခုပြီးသွားတိုင်းမှာ ဖန်ခွက် အသစ်တစ်ခွက် လဲလိုက်ဖို့ပဲ။ ဒီအတွက် ဘာမှ ထူးထူးထွေထွေ လုပ်နေစရာမလိုဘူး။
ဒါဟာ လူတစ်ယောက်ကို စကားပြောနေရတာနဲ့ မတူတဲ့ အချက်ပဲ။ လူတွေကျတော့ ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ ဖန်ခွက် တစ်ခွက်လိုမျိုး အလှဲအလှယ်လုပ်လို့မရဘူး။ နောက်ပြီးတော့ သူတို့ပြောချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို လိုက်လိုက်လျောလျော နားထောင်ပေးရတာမျိုးလဲ ရှိသေးတယ်။ နွားပျောက်သွားတဲ့ အကြောင်းလဲ ပြောချင်ပြောမယ်၊ ဇာတ်ပျက်သွားတဲ့ အကြောင်းလဲ ပါချင်ပါမယ်၊ သမိုင်းထဲက နေ့စွဲတွေကို ရွတ်ချင်ရွတ်နေဦးမယ်၊ တခါတလေ အလိုက်သင့် နားထောင်ပေးရတာ တော်တော့်ကို ကသိကအောက် ရောက်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခု။ ဒီလိုနေရာတွေကျတော့ ဖန်ခွက်တွေနဲ့ ဆက်ဆံရတာ အများကြီး နေသာထိုင်သာ ရှိတယ်။
ဖန်ခွက်မှာလဲ သူ့ရာဇ၀င်နဲ့ သူတော့ ရှိတာပဲ… ဒါပေမယ့် သိပ်ပြီးတော့ ခမ်းနားကြီးကျယ်တဲ့ ဇာတ်ကြောင်းလှန်ဖို့ရာ သိပ်မရှိဘူး။ ဖန်ခွက်တစ်လုံးဟာ လူတစ်ယောက်နဲ့ နှုတ်ခမ်းချင်းတေ့ပြီးတော့ အလုပ်သဘော ဆက်ဆံဖူးတာရှိဖူးမယ်။ ပြီးရင် နောက်တစ်ယောက်၊ နောက်တစ်ယောက် ဒီလိုနဲ့ သူ ကွဲရှသွားတဲ့တစ်နေ့ဟာ သူ့ဘ၀ ဆုံးခန်းသတ်သွားတဲ့နေ့ပဲ။ သူ့နေရာမှာ တစ်ခြား ဖန်ခွက်တစ်လုံးက ဆက်လက် အလုပ်လုပ်ပေးနေဦးမှာပဲ။
အရှေ့တိုင်းဖန်ခွက်နဲ့ အနောက်တိုင်း ဖန်ခွက် ဘာကွာခြားလဲတော့ မသိဘူး။ ဖန်ခွက်ဟာ ဖန်ခွက်ပဲပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အရှေ့တိုင်းက မိန်းကလေးတွေနဲ့ အနောက်တိုင်းက မိန်းကလေးတွေကတော့ ကွာချင်ကွာမှပေါ့။ ဂျပန်မှာဖြစ်ဖြစ်၊ တရုတ်မှာဖြစ်ဖြစ် ဘား မှာ သွားထိုင်ရင် သူတို့က ခင်ဗျားဘေးမှာ လာထိုင်ပေးမယ်။ ခင်ဗျား ပြောသမျှ သူတို့နားထောင်မယ်။ ဒီအတွက်တော့ ခင်ဗျားက သူတို့သောက်သမျှ ရှင်းပေးရဦးမယ်။ That’s the deal. ဖန်ခွက်တွေကျတော့ သူတို့အတွက် တိကျတဲ့ ဈေးနှုန်းရှိပြီးသား။ ကိုယ်ကြိုက်တာမှာပြီး ငွေပေးခြေလိုက်ရုံပဲ။ သိပ်ပြီး ထူးထူးထွေထွေ ရှိလှတယ် မဟုတ်ဘူး။
Posted by Aung Htut at 2/12/2013 06:12:00 PM4comments
နှစ်ကူးဆိုသည်မှာ တရုတ်နှစ်သစ်ကူးကို ဆိုလိုသည်။ “တရုတ်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ဘယ်က စတယ်” ဆိုတဲ့ပိုစ့်လေးကို မနှစ်က တင်ဖြစ်သည်။ စိတ်ဝင်စားသူများ ကလစ်နှိပ်ပြီး ဖတ်ကြည့်ပါ။ ဘာလိုလိုနှင့် ချိနခေါ် ကာဋ္ဌေးခေါ် စီလုတ်ပြည်ကြီးတွင် နှစ်သစ်ကူးရသည်မှာ ခုဆိုလျှင် ၃ နှစ်ရှိပေပြီ။ “ကုန်စီး… ကုန်စီး…. ကုန်စီးနီရာ… ကုန်စီး… ကုန်စီး… ကုန်စီး..နီ” ဆိုပြီးတော့ လမ်းတွေမှာ သီချင်းတွေ ဖွင့်ကြသည်။ ကုန်းစီးဖားချိုင်ဆိုပြီးတော့ လူတွေ့လျှင် “မင်္ဂလာ နှစ်သစ်ကူးပါ” ဆိုပြီး နှုတ်မဆက်လေနှင့် “အမ်ပေါင်း နားလိုင်” ဆိုပြီးမေးသည်။ အမ်ပေါင်းကတော့ ဘယ်နားမှာနေမှန်းမသိ။ လူတွေ့တိုင်း အမ်ပေါင်း ပေးရလျှင် သေရချည့်။
ဟိုနား ဒီနား ဘယ်သွားသွား တဖောင်းဖောင်း ဖောက်လိုက်တဲ့ ဗျောက်အိုးတွေမှ သောက်သောက်လဲ။ တစ်ခါတစ်လေ ညအိပ်ကောင်းနေတုန်း အုန်းဒိုင်းဆိုပြီး ဆူညံနေလို့ လန့်နိုးရတဲ့ ညတွေလဲ ရှိရဲ့။ နှစ်သစ်ကူးဆိုသည်မှာ စီလုတ်ပြည်ကြီးမှာတော့ အလွန်အရေးကြီးတဲ့ ပွဲတော်ကြီး။ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်က မိသားစုတွေ တစ်နှစ်တစ်ခါ ပြန်လည်ဆုံစည်းရတဲ့ အချိန်။ တရုတ် စတော့ ဈေးကွက်မှာ ၁၁ လပဲ အလုပ်လုပ်သည်။ ဖေဖော်ဝါရီ တရုတ်နှစ်သစ်ကူးချိန်ဆိုလျှင် စတော့ ဈေးကွက် မှာ မြားဦးက အောက်ခြေထိလုနီး။
Posted by Aung Htut at 2/07/2013 08:49:00 PM 8 comments
ပြင်သစ် နိုင်ငံရဲ့ မြို့တော် ပါရီ (Paris) မှာတော့ ယခုအခါ ပျိုပျိုမေတို့အတွက် သတင်းကောင်း ဥပဒေကို ပြင်ဆင်မွန်းမံလိုက်ပါပြီ။ ဒီ ဥပဒေကတော့ အမျိုးသမီးတွေဟာ တရားဝင် ဘောင်းဘီရှည် ၀တ်ဆင်ခွင့် ရပါပြီတဲ့။ ၂၁၄ နှစ်ကြာ တားမြစ်ထားတဲ့ ဥပဒေကို ၁၇၉၉ ခုနှစ်မှာ စတင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာ ဖြစ်ပြီးတော့ အဲဒီအချိန်တုန်းက အမျိုးသမီးတွေဟာ ဘောင်းဘီရှည်ဝတ်ဆင်ချင်ရင် ရဲအရာရှိဆီမှာ အထူးခွင့်ပြုချက်ကို ရယူရမယ်လို့ ဆိုထားတာပါ။ ၁၈၉၂ ခုနှစ်မှာတော့ အကယ်၍ အမျိုးသမီးဟာ မြင်းဇက်ကြိုးကို ကိုင်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ ဘောင်းဘီရှည် ၀တ်ဆင်ခွင့်ရမယ် လို့ ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၀၉ ခုနှစ်မှာတော့ ဒီဥပဒေကို ထပ်မံပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကတော့ အမျိုးသမီးဟာ စက်ဘီးစီးနင်းနေတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် စက်ဘီးဂိုက်ကို ကိုင်ထားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် ဘောင်းဘီ ပုံစံအမျိုးမျိုး ၀တ်ဆင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာပါ။ ၁၉၄၆ ခုနှစ်မှာတော့ ယောက်ျားများနည်းတူ အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရလာတော့ ဒီဥပဒေ ဟာ မျက်စေ့စပါးမွှေးစူးစရာဖြစ်လာပါတယ်။ ခုတော့ အမျိုးသမီးများ အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးက အမျိုးသမီးတွေကို တရားဝင် ဘောင်းဘီရှည် ၀တ်ဆင်ခွင့်ပေးလိုက်ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ချွင်းချက်တစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်။ ခေတ်မမီတော့တဲ့၊ ဒါမှမဟုတ် အများအမြင်မသင့်လျှော်တဲ့ ဘောင်းဘီရှည်မျိုးကိုတော့ ၀တ်ဆင်ခွင့် မရှိပါဘူးတဲ့။ ဘာကြောင့်ရယ်တော့ အကျွန်လဲ မလျှောက်တတ်။
Posted by Aung Htut at 2/05/2013 10:57:00 PM6comments
­­ဒေါ်ဇာဖြူတို့က ပင်လယ်ပိုင်းက။ ပွင့်ကောင်း ငံပြာရည်တို့နဲ့ တစ်ရွာထဲသားတွေ။ ပွင့်ကောင်း ငံပြာရည်ဆိုတာက အခု ရွှေပုဇွန် ကိတ်နှင့...
ဒါကတော့ အိုစမာ ဘင်လာဒင်နေတဲ့ အိမ်ကို အမေရိကန် အထူးကွန်မန်ဒိုတွေ ၀င်စီးတဲ့ ဗီဒီယိုပါ။ အမေရိကန်က မှတ်တမ်းအဖြစ် ထုတ်ဝေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ေ...
ကျွန်တော်နှင့် ဘုံဘေ အပိုင်းအစများ ၁
စွန်နား.. စွန်းနား… အချားဟဲ… မွန်ဘိုင်း… မွန်ဘိုင်း.. အချားဟဲ…….ဟဲ အဟဲ… ဘုံဘေ သို့ရောက်နေသည်။ အရင်တုန်းက ဘုံဘေသည် ခုတော့ မ...
သတိ… ၀ သောသူများ အရေးယူမည်
ဂျပန်မှာတော့ မ၀အောင်နေရေး ဥပဒေကို ပြီးခဲ့တဲ့ ၄ နှစ်လောက်ကထည်းက ထုတ်ပြန်ထားပါသတဲ့။ ယောင်္ကျားလေးဆိုရင် ခါး ၃၃လက်မခွဲထက် မကျော...
ယုံချင်ယုံ မယုံချင်နေ စင်္ကာပူ ဖုန်းရွှေ ပုံပြင်များ ၁
ဒီအကြောင်းလေးကတော့ စင်္ကာပူက လူတစ်ယောက်နဲ့ စကားစပ်မိလို့ ပြောရင်း ဒီအကြောင်းလေးကို စိတ်ဝင်စားတာနဲ့ သူပြောတာလေးရော အင်တာနက်ထဲမှ...
ဘောလီဝုဒ် ဘောလီဝုဒ်သည် ဘုံဘေတွင် အခြေစိုက်လေ၏။ အမီတာဘချမ်း၊ ရှရွတ်ခမ်း၊ အမီရာခမ်း၊ ရှာမန်ခန်း၊ ကပူးခန်း၊ ခရီတီ ဆနွန်၊ အလီယာ...
ဒီပြဿနာစတာက ဟိုလူကြီး ကမောင်သန့် ကနေ စတာ။ စဆို သူက ပိုစ့် ၃ ပိုစ့်နဲ့ ဆွလိုက်တာ.. အတိတ်နမိတ်ပေးတာကတစ်မျိုး ၊ စင်ကာပူ မပါဘူ...
၇နှစ် - ကွာခြားချက်များ
(ဒီပိုစ့်ကို ကျွန်တော်တင်တာဟာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အကောင်းတွေကိုချည်း ဖော်ပြချင်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ ပါတ်သတ်လို့ ကျွန်တော်တို့ အမြင...
၂၀၁၂ ဧပြီလ ၂ရက်နေ့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ် အမည်စာရင်းများ
၁၃၇၃ခုနှစ် တန်ခူးလဆန်း ၁၁ရက် (၂၀၁၂ ဧပြီလ ၂ရက်) MRTV သတင်းမှ - ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ကြေ...
ပျောက်ဆုံးသွားသော တူနာ ... - ရုံး pantry ထဲက ရေခဲသေတ္တာပေါ်မှာ tacoll ညနေ ၂ နာရီခွဲအထိ ရှိသေးတယ် ပျောက်သွားတယ်။ ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်ဖုန်းနံပါတ်ကို ဆက်သွယ်ပြီး တောင်းပန်လို့ရေးထားတဲ့ နိုးတ...
ဝါးလုံးခေါင်းထဲကုန်းအော်ကြသူများ - မင်္ဂလာပါရှင်~~~ အွန်လိုင်းပေါ်က ဆိုရှယ်မီဒီယာဆိုပါတော့လေ..အဲလိုနေရာမှာပြောတာဆိုတာကို မယ်ငီးတော့ ဝါးလုံးခါင်းထဲကုန်းအော်ခြင်းလို့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုပါသည်...။ ...
လတ်တလော ဖတ်ဖြစ်နေသောစာအုပ် - ၂၀၁၇ ခုနစ်ဒီဇင်ဘာ (၃၁) ရက်နေ့ည ၁၂ နာရီကတည်းကဖေ့စ်ဘွတ်ကို Deactivate လုပ်ထားတာအခုဆို ၅ လ ပြည့်လာပြီ။စပိတ်ခါစတုန်းကတော့အချိန်ရတိုင်းဖေ့စ်ဘွတ်မှာကျက်စားနေတဲ့...
ခုတလောဓါတ်ကျနေတဲ့ အစာ.... - ခုတလော ကျွန်မဓါတ်ကျနေတဲ့စားစရာကတော့ ဖရဲသီးစေ့ ကွာစေ့ပါ...။ ထိုင်းကလာတဲ့ ပုံပါတဲ့အတိုင်း တစ်ဗူးကို 1900ကျပ်ပေးရတယ်...။ အဖုန်းမှာ ကွာစေ့ကိုညှပ်စားရမယ့် ည...
Incidents in the life ofaMartial Artist (5) - ကိုယျခံပညာတခု လလေ့ာတဲ့အခြိနျမှာ ကိုယျ့ရဲ့ခါးစညျး အဆငျ့တှမှော အဆငျ့တဝကျက လလေ့ာလို့ရတာ ဖွဈပွီးတော့ နောကျထပျတဝကျက သူမြားတှကေို သငျပေးလို့ရတာလို့ ဆုံးမလရှေ့...
နှအေပွ နှအေပွော - *နှအေပွ နှအေပွော* လှနျလပွေီးသော အဖွဈ လှနျလပွေီးသော အခဈြ သိပျမငိုနဲ့ သိပျပူတယျ လမျးထဲမှာ ရငျထဲမှာ ဘယျတဈခုနဲ့ လောငျမိမှာလဲ ဘယျတဈခုနဲ့ စှဲနမှောလဲ ငွိမျးသ...